Ara-dalàna ve ny fanairana fanairana Windows Security? - Am-Baravarankely
Tena > Am-Baravarankely > Fanairana Windows securiy - ny fomba hiatrehana
Fanairana Windows securiy - ny fomba hiatrehana
Ara-dalàna ve ny fanairana fanairana Windows Security?
'Fanairana Windows Security'dia hafatra hadisoana sandoka asehon'ny tranonkala mampidi-doza. ... Tandremo anefa fa 'Fanairana Windows Security'sandoka. Tsy misy ireo virus voatanisa ireo. Cyber ​​mpanao heloka bevava miezaka fotsiny mba hampitahorana sy ny fitaka sy ny niharam-boina ho any miantso mandoa ny asa izay tsy ilaina.
- Ny lozisialy Antivirus dia malaza amin'ny fampihenana ny solo-sainanao ka hatramin'ny tsy fieritreretako azy, ny zavatra voalohany esoriko dia ny zavatra esoriko voalohany rehefa mahazo rafitra vaovao miaraka amin'i McAfee na i Norton efa napetraka, fa na dia matotra aza ny fampiharana anti-malware, apetraka miaraka amin'ireo programa maharikoriko natao hiadiana amin'izy ireo, ny solosaina maoderina koa haingana kokoa noho ny Pentium 166 MHz nampiasako fony taloha. Ka ny Antivirus dia mbola mihazakazaka any ambadika any toy ny mandeha manodidina miaraka amina frein? Wow, mahatsiravina izany. Mahatsiravina, tsy toy ny mpanohana anay.
Mafana grizzly! Thermal Grizzly's Conductonaut metal metal interface interface dia manome fampisehoana fihenam-bidy betsaka indrindra ho an'ny PC Music) (lany ny mozika) Raha te hahalala hoe maninona ny lozisialy fiarovana no misy fiantraikany amin'ny hafainganan'ny rafitra, mila fahalalana kely isika. Araka ny efa noresahiko tamin'ity fizarana 2014 Fast As Possible ity, ny rindrambaiko Antivirus sy Anti-Malware dia tsy zavatra mitovy. Ny programa Antivirus dia mifantoka indrindra amin'ireo olon-dratsy ao an-jaridaina, toy ny viriosy, kankana, Trojan, ary keylogger.
Ary nihazakazaka tany ambadika tany foana izy ireo mba tsy hisy hidona ao izay mety ho nandatsaka loharanom-pahalalana sarobidy ary azo nampiasaina hanomezana ny tampon'ny tankin'i Lara Croft (manala ny tenda) amin'ny antsipiriany bebe kokoa. Saingy satria ny programa antivirus dia mifantoka kokoa amin'ny vondrona manokana fandrahonana fantatra, dia mety tsy hahita malware vaovao izy ireo. Mitovy amin'ny fanandramana fiheverana malaza amin'ireo programa Gorilla anti-malware nampiana.
Natao izy ireo mba hanao scan tsy tapaka sy lalindalina kokoa amin'ny rafitra iray manontolo mba hitady lamina amin'ny fitondran-tena na soritr'aretina izay mety hanondro aretina iray, fa tsy programa manokana azo fantarina. Mazava ho azy fa ny fakana sary lalina dia maka fampiasana CPU, ary indrindra amin'ny andron'ny kapila mafy mekanika, dia hiteraka ny sidina manodidina anao, ka hahatonga ny rafitra tsy handray andraikitra kokoa rehefa miasa Orse, ny ankamaroan'ny suite anti-malware dia misy antivirus -Fomba toa ny tena izy fanaraha-maso fandrahonana mandritra ny fotoana fohy sy fisintomana rakitra alaina, noho izany dia toy ny boky iray izay mandany intelo ny loharanon'ny fampitahorana fantatra, noho izany dia nandany fotoana sy loharano bebe kokoa hikarohana lisitra lava kokoa noho ny CVS -Receipt. Noho io antony io dia nampiadana ny solosaina PC ny rindranasa fiarovana, fa ratsy toy inona kosa ankehitriny? fitsapana sasany, fisafidianana fampiharana fiarovana malaza sasany ary tsy misy fiarovana.
Fantatrao, toy ny fanaraha-maso. Ny fanandramana fanandramana anay dia natao mba hisolo tena ny lalao filalaovana avo lenta, fa iray kosa taona vitsy lasa izay, ary nampandehaninay izany niaraka tamin'ny Windows Security, ilay fiarovana namboarina izay, raha ny fahalalantsika, dia nisy fiatraikany kely amin'ny Has fampisehoana. Nampiasainay koa ny roa amin'ireo anti-malware mahatsiravina indrindra hanimbana ireo solosaina finday voaomana mialoha sy ampiasain'ny mpankafy PC: McAfee sy Norton. (Tezitra solosaina tabataba) W andavanandro isika mifantoka amin'ny asa andavanandro.
Fantatr'izy ireo ny faharetan'ny fisintomana, fametrahana ary fanombohana fampiharana. Unzip, famindrana rakitra ary alefaso Windows. Zavatra toa izany.
Izahay koa dia nihazakazaka farafahakelin'ny zotram-panehoana feno hafanam-po kokoa, ary tena misy ny valiny mahagaga amin'ny valiny. Voalohany indrindra, ny CPU maoderina quad-core dia tokony ho ampy hiatrehana ny fizahana fototra. Ny fanadinana lalao anay dia fanasan-damba fotsiny, ary ny tena ratsy indrindra tany Cinebench raha oharina amin'ny fifehezana anay dia McAfee, miaraka amin'ny fahasamihafana telo isanjaton'ny fahombiazany.
Na izany aza, nandroaka ahy ity manaraka ity. Na dia amin'ny PCI Express sy DM SSD aza, ny enta-mavesatra izay mahatratra ny CPU sy ny fahatsiarovana dia saika miadana kokoa miaraka amin'ny anti-malware noho ny tsy misy, ary samy manana sazy mihatra avo lenta kokoa i Norton sy i McAfe raha oharina amin'ny Windows Defender. Ny fisie iray dia nitaky 35% lava kokoa hanala zotra miaraka amin'i Norton napetraka ao amin'ilay rafitra, raha ampitahaina amin'ny volavolan-tsika, ary ny Adobe Premiere Pro dia teo anelanelan'ny 5 sy 30% miadana kokoa hanombohana miaraka amin'i Windows Defender ary 25 ka hatramin'ny 35% miadana miaraka amin'i McAfee sy Norton, raha oharina amin'ny na inona na inona. .
Tsy misy mihitsy, tsy misy mihitsy. Lttstore.com.
Marina fa amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra izany fotsiny segondra vitsy, fa amin'ny isan-jato teny izany fotsiny be mihoatra noho izay tokony amin'ny fotoana izay Heveriko fa mbola misy manome matanjaka fanamarinana noho ny hatezerana fa rafitra mpanamboatra no bundling rindrambaiko, indrindra fa amin'ny entry- milina haavo. Ny tiako holazaina dia na any amin'ny toerana tsy niheverako azy ho zava-dehibe mihitsy aza. Ho nolazaiko tamin'i Riley ny tsy hanelingelina fitsapana hafainganam-pandehan-drakitra rakitra, nahita vokatra manafintohina izahay tamin'ny farany.
Rehetra ny anti-malware fandaharan'asa dia avy ny fanaraha-maso ao anatin'ny segondra ny famindrana ny 1 gigabyte rakitra ny lohamilina eo amin'ny tambajotra an-toerana, fa tsarovy, izany no Ohatra iray izay misy ny bottleneck no ethernet fifandraisana. Rehefa mifindra amin'ny SSD eo an-toerana ianao dia valo segondra no tsy fitovizany miaraka amin'i Norton ary miaraka amin'i McAfee any aoriana 12 segondra dia ratsy lavitra noho ny taloha, izay nanombohana ny fanaovana scanner ary hanao sôkôla mafana na zavatra ara-bakiteny ianao eo am-piandrasana izany. manomboka ny lalao. Ahoana àry no Nampisy Antsika? Ny PC dia nanjary matanjaka kokoa noho ny tamin'ny fotoana nihalehibe ahy, ary ny asa izay nampiasaina nandany habetsaky ny herin'ny CPU izao dia mandray ampahany amin'ny isan-jato.
Faharoa, tadidinao ve ireo tahiry malware lehibe noresahintsika? fampiantranoana eo an-toerana ao amin'ny PC anao, fa ankehitriny ireo orinasa manohitra ny malware dia mampiantrano azy ireo ao anaty rahona, izay ahafahan'ny mpizara manao ny fanodinana sasany, izay fanamaivanana mamy ho an'ny PC anao, manomboka fampiharana na fisintomana rakitra na inona na inona, tena ela kokoa noho ny fitsapana manaraka. Misy dikany izany satria fantatry ny rindrambaiko fiarovana fa amin'ny manaraka dia azo antoka izy io, raha vantany vao scanina ilay fampiharana na fizotranao dia manomboka azy ianao. Ary mahafinaritra fa niasa ity endri-javatra ity satria na dia nisy aza ny fiakarana an-tsehatra tamin'ny voalohany, farafaharatsiny mba tsy hitovizany zavatra mitovy foana izany ary hampiadana ny asa isaky ny tsy miteny aho hoe: 'Hey, mandehana bareback, mahafinaritra anao izany dia ho tia azy.
skype mitantana endri-javatra
Zava-dehibe ny fiarovana, indrindra ho an'ireo olona manao fihetsika mampidi-doza amin'ny Internet, milaza fotsiny izahay fa ity lahatsoratra ity dia tena nanentana antsika mba hahafantatra bebe kokoa ny raharaha ifotony, eny fa na dia ireo izay azoko amin'ny ampahany amin'ny fonosana toa an'i Windows Defender fotsiny aza. ho vatofantsika sambo nomerika amin'ny fahombiazan'ny PC-nao. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba azy ianao dia misy tranokala iray natokana ho an'ny fanandramana Comprehensive Anti-Malware Testing. Ka raha manana segondra vitsy ianao ary manan-danja aminao ireo segondra vitsy ireo dia hanana rohy vitsivitsy ao amin'ilay famaritana izahay hanampy anao hahafantatra hoe iza amin'ireo no hijanona ho azo antoka sy haingana miaraka amin'izay, oh. karazana hybrid sokatra sokatra-bunny.
Tsy azoko antoka fa misy maniry an'io, farafaharatsiny tsy araka izay tian'izy ireo ho re momba ny mpanohana anay; Fandraisana amin'ny Internet tsy miankina. Inona no ao amin'ny kitanao fiarovana amin'ny Internet? Manampy ny VPN dia hanampy anao hanafina ny IP sy ny encrypt fifamoivoizana ny sy avy amin'ny fitaovana. Pia manolotra asa fanompoana azo itokisana amin'ny maherin'ny 30.000 lohamilina amin'ny firenena 30 mahery.
Tsy voafetra ny fantsom-pifandraisana ary manana encryption azo alamina miaraka amin'ny switch internet kill izay ahafahanao mifehy ny fifandraisanao. Miaraka amin'ny fizahana manokana, ny tranokalan'ny PIA dia mety hahatonga anao hieritreritra fa any amin'ny firenena hafa ianao, miaraka amin'ny tombontsoa isan-karazany toy ny fidirana amin'ny atiny izay vidiny geoblocked na mora kokoa amin'ny sidina rehefa miverina ny sidina. Afaka mifandray amin'ny fitaovana dimy ianao amin'ny Mandritra izany fotoana izany miaraka amin'ny kaonty tokana miaraka amin'ny mpanjifa ho an'ny Windows, macOS, Android, IOS, ary Linux, ary manana andrana maimaimpoana izy ireo. Ka zahao izy ireo amin'ny rohy ao amin'ny famaritana ny lahatsoratra.
Aza miandry fa mahafinaritra. Raha niresaka ny lehibe, raha tiany lahatsoratra ity, angamba jereo ny-Hey, dia manana zavatra feno fahasahiana milaza ny mpanao. Raha ny mahazatra aho hoe ny tena teny sy bip fotsiny azy mihitsy teo amin'ny namany Sary, fa ny lahy eto dia mijery ahy tsoratra amin'izao fotoana izao, ka tsy manao izany aho, fa izahay dia iray amin'ireo, fantatrao, ny zavatra sasany, momba ny hoy ny mpanamboatra? Windows mode mode ary raha misy mahasamihafa azy.
Manana rohy mankany aho izany eto ambany
Ahoana no fomba hialako amin'ny fampandrenesana fiarovana Windows?
Ahoana no manalanyFanairana Windows SecurityFromManangonaamin'ny PC-ko
Tsindrio ny bokotra Start, avy eo kitiho ny 'Control Panel.'
Kitiho ny 'Action Center' raha toa ka napetraka ny solosainaonymba hampisehoana Control Panel zavatra rehetra. ...
Tsindrio 'Change Change Center setting.'
esoryny marika rehetra hita eo amin'ny efijery ary tsindrio 'OK.'
Hellotutorial dia mampiseho aminao ny fomba famonoana vonjimaika ny Windows Defender amin'ny Windows 10 amin'ny fampiasana ny Security Center ary ny fomba faharoa hanakanana maharitra ny Windows Defender amin'ny Windows 10 amin'ny fampiasana ny Local Group Policy Ahoana ny fomba hamonoana ny Windows Defender amin'ny Windows 10 amin'ny fampiasana ny Security Center Mandehana any amin'ny Fiarovana Virus sy Fandrahonana Tsindrio ny safidy hametrahana Fiarovana Virus sy Fandrahonana Maninona, vonoy izao ny toggle fiarovana amin'ny fotoana tena Izy rehetra dia ho voaroaka vonjimaika i Windows Defender, ka amin'ny manaraka hamerenanao ny solosainao dia ho Windows Defender Antivirus mandeha ho azy averina ho azy OK, andao hiverina izy io ary izao dia alao tsy hampijanona maharitra ny Windows Defender amin'ny alàlan'ny Politikan'ny vondrona eo an-toerana Araka ny hitanao, mandeha ny Windows Defender, ary raha tsindrio marina eo amin'ny fampirimana iray ianao dia hitantsika ny sary masina scan , mankanesa ao amin'ny boaty fikarohana ary manorata gpedit.mscAry tsindrio ny bokotra Windows + R amin'ny kitendry ary manorata baiko iray ao ter ConfigurationDoblik-tsindry Administrator Avy eo mandehana any amin'ny Windows Components Scroll down ary mahita Windows Defender Antivirus tsindrio avy hatrany Vonoy Windows Defender Antivirus ary kitiho ny Edit Safidio ny safidy Eniled mba hamonoana ny Windows Defender Aorian'izay dia avereno indray ny solo-sainao. azonao jerena, Windows Defender Antivirus dia kilemaina soa aman-tsara, misaotra tamin'ny fijerena, azafady mba misoratra anarana amin'ny fantsoko ary mahazo torohevitra tsara kokoa
Ahoana no hanamboarako ny fampandrenesana momba ny fiarovana Windows?
Mandehana any amin'ny menio 'Start' ary safidio ny 'Control Panel.'
Kitiho indroa ny 'AROIvon-toerana afovoany ary kitiho ny 'Change the wayAROCentrefanairanaaho 'rohy eo ambanin'ny' Resources 'ao amin'ny'AROCenter 'varavarankely. Esory ireo safidy tsy tianaofanairanafa ao amin'ny 'AlertFikirana 'varavarankelyary tsindrio 'OK.'
kaody hadisoana 0x800700aa
Amin'ity lahatsoratra ity dia hitantsika ny fanamboarana ny olana rehefa azonao ny hafatra 'Tsy afaka manomboka ny serivisy Windows Security Center' ao amin'ny Windows 10. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao ny olana ary avy eo hizara aminao ny vahaolana.
Ka eo amin'ny birao aho ary rehefa manandrana manokatra Security and Maintenance ao amin'ny Control Panel ianao dia afaka mahita fa misy hafatra fiarovana milaza fa tsy mandeha ny serivisy Windows Security Center ary rehefa manandrana manala azy amin'ny 'The Windows Security Center Service aho tsy azo atomboka 'dia aseho. Ary rehefa mankany amin'ny snap-in Services aho hanombohana tanana ny serivisy dia tsy vitako izany. Ka ao anaty Services snap-in aho ary midina mankany amin'ny Security Center Service ary hitanao fa ny karazana fanombohana an'ity serivisy ity dia 'Disiled'.
Rehefa tsindrio indroa ny serivisy dia tsy misy safidy azo kitihana. Rehefa feno volombava ny safidy rehetra, tsy azoko atao ny manindry ny bokotra Start eto hanombohana ny serivisy satria volondavenona izy. Ahoana no hamahana an'io olana io, ho hitantsika izao.
Ka ity ny vahaolana! Mila manova ny fisoratana anarana sasany ianao. Azo amboarina mora foana ity. Mba hanaovana izany, dia mila mihazakazaka ny regedit baiko hanokatra ny lisitra tonian-dahatsoratra.
Kitiho ny Eny amin'ny mailaka fanamafisana ny UAC. Tonian-dahatsoratra ao amin'ny lisitra varavarankely, ka mankanesa any HKEY_LOCAL_MACHINE> RAFITRA> CurrentControlSet> Services> wscsvc sy ny tsara pane of 'wscsvc'you dia ho afaka ny hahita ny lisitra DWORD atao hoe Start izay nametraka ny 4 satria ianao miatrika ity olana ity. Ny sisa ataonao dia tsindrio indroa ity DWORD fisoratana anarana ity, apetraho amin'ny 2 ny angon-drakitra ary kitiho ny OK.
Noho izany dia napetraka ho 2 ny angon-drakitra ankehitriny ary hakatonay izao ny tonian-dahatsoratry ny rezistra ary hamerina ny rafitra hanan-kery. Aorian'ny famerenana ... ary miditra amin'ny kaontiko dia hojereko raha voavaha ny olana.
Mba hanaovana izany dia manokatra ny Security sy Maintenance ao amin'ny Panel Control aho. Araka ny hitanareo misy hafatra ka tsy manana ahiahy. Midika izany fa azo antoka izao ny rafitra ary efa natomboka na efa milamina tsara ny Windows Security Service.
Noho io antony io dia tsy manana hafatra ao amin'ny faritra 'Fiarovana sy Fikojakojana' aho. . Mba hanamafisana indray ny satan'ity serivisy ity dia mandeha any amin'ny snap-in Services aho ary ao amin'ny snap-Services dia hitanao fa mbola tsy mandeha ny serivisy, ka manomboka fotsiny aho toa ny nametrahana azy ho mandeha ho azy (Taraiky Start) ary izao dia mandeha ny serivisy ary tsy misy hafatra miseho ao amin'ny fizarana 'Security and Maintenance' ao amin'ny tontonana fanaraha-maso Midika izany fa voavaha ny olana! Misaotra anao nijery ity lahatsoratra ity.
Raha nahita izany manampy, izay toy izany ihany, mizara izany, ary aza adino ny misoratra anarana amin'ny fantsona YouTube ny lahatsoratra bebe kokoa!
Ahoana no manala ny Windows fiarovana hafatra?
nyesoryny 'Fanairana Windows Security”Pop-ups, araho ireto dingana ireto: STEP 1:esoryireo programa mampidi-doza avy amin'nyam-baravarankely. STEP 2: Mampiasà Malwarebytes amin'nyesory'Fanairana Windows Security”Adware. DINGANA 3: Ampiasao HitmanPro mba banjino ny fandaharana malware sy tsy ilaina.22 Jul 2019
Inona avy ireo soritr'aretin'ny fampandrenesana fiarovana Windows?
Famintinana fandrahonana anarana Windows Security Alert scam Type Tech Support scam, adware, popups, popup ... Gejala mahatsapa tonon-taonina tsy ampoizina ianao ... Fanalana ny torolàlana fanesorana Windows Security Alert
Misy fomba tsy hanajanonana ny fampandrenesana momba ny fiarovana Windows?
Na izany aza, raha tsy hitanao fa ilaina ireo fampandrenesana ireo, satria mampiasa vahaolana fiarovana hafa ianao, na manamarina an-tsokosoko ny fampiharana hanaraha-maso ny fahasalamana sy ny filaminan'ny fitaovana dia azonao atao foana ny manafoana ireo fampandrenesana ireo na ampanjifaina ny fikirana hampandrenesana anao amin'ny hetsika manokana fotsiny.
Misy fomba ve hanesorana ny fanairana Windows fiarovana sandoka?
Raha tsy te hanana olana amin'ny tanana ianao amin'ny fanesorana ireo malware tompon'andraikitra amin'ny fampandrenesana Windows Security sandoka, dia azonao atao ny mitady vahaolana fiarovana rehetra. Ny vahaolana fiarovana toy ny programa antimalware dia noforonina mazava mba hahitana sy hanalana ireo fampiharana sy kaody manimba toy izany.
Aiza no ahazoako fampandrenesana Microsoft Security?
Azonao atao ny misafidy amin'ireo endrika fototra sy feno. Ireo fampandrenesana ireo dia nosoratana ho an'ny matihanina amin'ny IT, misy fampahalalana teknika lalina, ary vita sonia nomerika amin'ny PGP. Tsidiho Security Service Notification ny famandrihana. Tsy maintsy miditra miaraka ianao na mamorona kaonty Microsoft. Security Advisories Alerts